Ubhaka, Laptop Bag, Lady esikhwameni, Isikhumba Bag - Kailaien
The Single ihlombe Bag
Kunezinhlobo eziningi imikhiqizo, efana nokuzula okuqotho lesikhumba izikhwama, izikhwama yezimonyo, PU izikhwama, umakhalekhukhwini amasethi, izingubo, imihlobiso nokunye. Bahlanganisa kuzo zonke izici zokuphila.
Kailaien Quality Okufakiwe (Dongguan) Co., Ltd. wawusegunjini Dongguan Guangdong, ujabulela zokuthutha elula futhi imvelo enhle.
Inkampani yethu ihlanganisa indawo ka 2500 square metres futhi ine abasebenzi ezingaphezu kwezingu-95 futhi bangaphezu kuka-5 ochwepheshe. Sesiphila ezikhethekile ku okuklama, ekucubunguleni futhi yokukhiqiza tinhlobo letehlukene izikhwama futhi ube nesikhathi ongeke ukukhiqizwa umthamo yonyaka zezinhlamvu phezu 3.000.000 izikhwama.
Inkampani yethu ine umuzwa ocebile esikhwameni kanye emaphaketheni umkhakha. Imikhiqizo yethu eziyinhloko zihlanganisa ubhaka, esikhwameni se-laptop, umntwana cover ncwadi, isikhwama drawstring, ethenga isikhwama futhi ezahlukene ezikhethekile emaphaketheni izikhwama imikhiqizo electronic. Ngaphandle kwalokho, senza imizamo emikhulu ukuze uthuthukise imikhiqizo emisha ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene.
ukukhiqizwa ubuchwepheshe Enkulu, ukuhlinzeka imikhiqizo izinga, ukukunikeza engcono pre-yokuthengisa, emva-sales service.
Ungayikhetha Kanjani Ubhaka
Sikhungo Isingeniso Milan Interna ...
imikhiqizo zethu zahlukahlukene, high, kuhlanganise umthwalo, isikhumba izimpahla, wallets, amabhande, lesikhumba umakhalekhukhwini, lesikhumba izicathulo, lesikhumba nokunye.
I single bag ehlombe
2 / F, Isakhiwo B, No.9 Mingzhu Street, Shima, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong 523731, China
Big Umthamo ubhaka Manzi , ubhaka, Duffel Ezemidlalo Bag , Big ubhaka, Abesifazane ubhaka Bag Big Emuva Pack , Ezemidlalo Bag ,